Archive du 20161205
Tsipy kanetibe Tompondaka erantany ny Malagasy
Voahosotra ho tompondaka erantany eo amin�ny taranja tsipy kanetibe ny ekipam-pirenena Malagasy notarihan�Andrianiaina Christian na i Nanou misy an�i Tita � Mims � Razakarisoa, Hery Razafimahatratra ary Lova Rakotondrazafy.
Fifidianana amin�ny 2018 Tsy maintsy mandresy ny HVM�
Mandeha sahady ny kajikajy politikan�ny antokon�ny fitondrana mba hanomanana ny fifidianana amin�ny 2018.
Toeran�ny minisitry ny angovo Banga 4 volana
Ny 20 aogositra 2016 teo no efa banga ny toeran�ny minisitry ny angovo, taorian�ny fodiamandrin�ny minisitra teo aloha, Ramanantsoa Rodolph.
Mpanohitra eto amin�ny firenena Tsy antenaina intsony
Mbola manomana paikady vaovao sa efa tofoky ny tsy fahombiazana ny mpanohitra eto amintsika ka aleo mangina sy mipetraka ? Tsy misy aloha hatreto ny fifandanjan-kery eo amin�ny mpitondra sy ny mpanohitra, ka manjaka tokana ny fanjakana HVM, izay toa tsy taitry ny fanoherana intsony.
Fihaonana tany Paris Hampitombo indray ny trosan�i Madagasikara ?
Maro amin�ireo famatsiam-bola ho azo taorian�ny fihaonan�ireo mpamatsy vola sy ny mpampindram-bola natao tany Parisy ny 1 sy 2 desambra teo no fanomezana, raha ny fanazavan�ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina.
Gangstabab Tsy ho kandida filoham-pirenena amin�ny 2018
Nivoitra io nandritra ny fampahafantarana ny fijoroan�ny rantsan�ny Antoko Politika Madio (APM) tarihin-dRakotoarisoa Faniry Alban na Gangstabab ao Mahajanga ny sabotsy 03 desambra teo.
Arahabaina aloha fa nahomby ny dia naleha ry Jean a ! Mitohy indray ny fampiesonana.
Andravoahangy Tsena Nobahanan�ny mpivarotra amoron-dalana ny mpaka fako
Tapaka nandritra ny fotoana naharitra ny lalana mandalo ny tsenan�Andravoahangy omaly alahady 4 desambra misandratr�andro.
Andohan�Ilakaka, Fianarantsoa Mampihorohoro ny �Gros Bras�
Velon-taraina ny olon-tsotra sy mpandraharaha sasany any amin�ny faritra noho ny afitsoky ny andian�olona izay milaza fa hoe akaikin�ny filoham-pirenena ka tonga dia manao be midina sy manao izay tiany.
Ala arovan�i Maromizaha Enin-dahy tra-tehaka nitrandraka tourmaline an-tsokosoko
Nandritra ny fitsirihana tampoka nataon�ny ekipa niarahan�ny zandarimariam-pirenena sy ny avy amin�ny ala sy ny tontolo iainana tany amin�ny alan�i Maromizaha ny zoma 2 desambra teo, taorian�ny nahazoan�izy ireo vaovao fa misy mitrandraka vato an-tsokosoko ao anaty ala arovana.
Akany fitaizana zaza kamboty ao Mahajanga Noraisin�ny Airtel an-tanana ny fanitarana azy
Nasiam-panitarana ny toerana fandraisana ireo zaza kamboty sy tsy manam-piahy beazina ao amin�ny ivontoerana �Sainte Famille� ao Antanimasaja Mahajanga.
Fampirantiana momba ny omby gasy Averina ao amin�ny Tahala Rarihasina
Be loatra ny halatra omby mitranga eto amin�ny firenena, indrindra fa ny any amin�ny faritra Atsimon�ny Nosy.
Kaominina Andoharanofotsy Nofaritana mazava ny lalan�ny mpandeha an-tongotra
Mba ho an�ny tombontsoam-bahoaka dia miroso amin�ny fanavahana ny lal�n�ny mpandeha an-tongotra sy ny arabe amin�izao fotoana izao ny kaominina Andoharanofotsy, distrikan�Antananarivo Atsimondrano.
Miasa ho anao ny fanjakana.
Manoatra noho ny hita talohan�ny frankofonia izao ny andavanandron�ireo mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Izay aleha rehetra na Ambohijatovo na Analakely.